Kwụsị Iwuli Crappy Software - Integrated Software ka Enwee Mmeri | Martech Zone
Kwụsị Iwuli Crappy Software - Integrated Software ka Enwee Mmeri
Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Na Tọzdee, Septemba 25, 2012 Chris Lucas kwuru
Nke a bụ ihe dị n'ime CIO's na ndị otu egwuregwu teknụzụ gị achọghị ka ị mara, mmejuputa ngwanrọ nke ọnwa 18 nke ga-efu gị $ 500K - $ 1MM nwere ike ịme hel nke otutu dị ọnụ ala karịa… ma kwesịrị ịdị. Ha na-ewulite nchedo ọrụ n’ihi na ọtụtụ ndị isi ọkwa C na ndị ahịa anaghị aghọtacha etu teknụzụ nwere ike isi rụọ ọrụ.
Dị ka ndị ahịa anyị niile chọrọ ngwanrọ ngwanrọ nke unicorn. Onye na eme edu ọgbọ, ihe okike, igu ndu, njigide ntughari… oh, ee, and has an nchịkọta oyi akwa n’elu ya. Ma, dị ka ndị na-ere ahịa na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ, anyị chọrọ ịga wuo ngwanrọ n'ihi na anyị kwenyesiri ike na anyị enweghị ike ịchọta ihe dị anyị mkpa. Eziokwu, bụ na anyị nwere ike ịchọta ihe ruru 90% nke ihe dị anyị mkpa ma ọ bụrụ na anyị akwụsị ịchọ unicorn na "ngwọta" dị oke ọnụ, karịa ọnụ ma bido ileba anya na ngwanrọ web na-arụ ọrụ na obere ego.
Yabụ kedu ihe ị kwesịrị ịchọ mgbe itinye n'ọrụ ngwa weebụ? Ndị a bụ ihe atọ kachasị elu ị kwesịrị ịchọ:
1) Na-ejikọta ọnụ
Ma ị na-achọ ndị na-enye ọrụ email, ngwanrọ nyocha, ma ọ bụ ihe ọ bụla dị n'etiti, ị kwesịrị ịchọ ọrụ na-ejikọ ọnụ. N'ihi gịnị? Maka na ọ pụtara na ọrụ ahụ ga-ahapụ gị ka ị jiri data gị otu ịchọrọ. Nzuzo maka iji ọrụ ọ bụla bụ ịghọta na otu isi echiche - data bụ nke gị, ọ bụghị ọrụ ahụ. Otu ụlọ ọrụ chọrọ ijikọ ọnụ na ọtụtụ ọrụ na-aghọta nke a ma si otú a mee ka iji ọrụ ha dịkwuo mfe.
2) Mepee API
Ọbụlagodi na ị bụghị onye nrụpụta na anụbeghi mmeghe API ị kwesịrị ịchọ ọrụ ndị nwere API mepere emepe. Ihe kpatara ya di mfe, API nyere onye obula aka iru oru na ngwa ahia n’elu ngwa ha. Gịnị kpatara nke a ji dị mkpa? Otu nnukwu ihe kpatara ya bụ na ọ na-enye ohere iji ihe okike bụ isi nke ngwa. Onye ọ bụla nwere ike ịbịa wulite ọrụ bara uru nke nwere ike imechi oghere ma ọ bụ nye gị ohere ọzọ. Isi ihe ọzọ kpatara ya bụ na can nwere ike iwuli elu n'elu ya. Cheta na unicorn m kwuru banyere ya na mbu? Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye na-emepụta ihe nwere ngwa ọrụ aka, ị nwere ike iwuli elu na ngwa ahụ, ma ọ bụ jiri data n'ụzọ ịchọrọ. Mepee APIss na-enye onye nrụpụta ihe ọ ga - arụ ọrụ na ya anaghị eme ka ị wuo ma ọ bụ wughachi ọrụ.
3) Obodo na-arụsi ọrụ ike
Otu ihe dị ịtụnanya m hụgoro na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a bụ otu ụlọ ọrụ / ngwa ọdịnala nke nabatara echiche nke njikọta nwere isi ọrụ, ahụike, na-arụ ọrụ. Ee, ụfọdụ dị gara gara karịa ndị ọzọ, mana imirikiti ụlọ ọrụ ndị nabatara echiche nke njikọta nwere isi ọrụ nke chọrọ ijikọ. Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa ịchọta ngwa ndị nwere obodo a? N'ihi na ọtụtụ ngwa ndị nwere nke a na-ekwukwa na ngwa ha, gee ntị na nzaghachi ndị ahịa, ma na-enwekarị ihe mkpali iji nọgide na-enwe ma na-eto eto ọrụ ahụ. Ọtụtụ ngwa ngwa na-akwụsị iterating ma ọ bụ naanị weghachite ya otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ. Chọrọ ịchọta ngwa ndị na-emewanyewanye ma na-atọhapụ njikọta ọhụụ, si otú a na-emepe gị ohere ndị ọzọ.
Ihe ndị a abụghị naanị ihe ị ga-achọ mana na ahụmịhe ha, ha na-egosi oke akara nke ezigbo ngwa. Ngwa agwakọta nwere ike inyere gị aka ịchekwa oge, ego, na isi ọwụwa. Lookingchọ iru unicorn bụ ọrụ onye nzuzu, ọkachasị mgbe ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa agwakọtara ọnụ nke na-edozi ọtụtụ mkpa gị.
Mee ka anyị mata ihe ụfọdụ ngwa ọrụ mgbakwunye kachasị amasị gị n'okpuru.
Kwado ezumike ezumike Email gị
Septemba 25, 2012 na 9:16 ehihie
Nhota na usoro iheomume na-atụ m n'anya mgbe ụfọdụ ndị otu IT nke ha na-enye ndị ahịa anyị na ụfọdụ ọrụ. Ị pụghị ikwu ya nke ọma… ntụkwasị obi, nchekwa na siri ike software dị mfe karịa mgbe ọ bụla ịzụlite.